बंगलादेशबाटै बाहिरियो विमान दुर्घटना हुनुको खास कारण : बिना आराम क्यानडाबाट १६ घण्टा उडेलगत्तै ढाकाबाट काठमाडौँ उडेका थिए ! — Riddle Nepal
काठमाडौँ- ५० जनाको ज्यान जानेगरी सोमबार, फागुन २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको युएस बांग्ला एयरलाइन्सको विमानका पाइलट अबिद सुल्तान जीवित रहेको जानकारी ढाकास्थित कम्पनीको कार्यालयले दिएको छ
। जहाजकी को-पाइलट पृथुला रशिद काठमाडौँ मेडिकल कलेज हस्पिटलमा उचारको क्रममा मृतक भएको पनि उक्त बायु सेवा कम्पनीले जनाएको छ ।
बीचमा आरामको समय नपाएकाले पाइलटको थकान र त्यसबाट निर्णय क्षमतामा पुगेको असरबारे यसले नयाँ बहसलाई जन्म दिने देखिन्छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर हरुको सम्बादबाट पाइलटले टावरको निर्देशनका बाबजूद बाटो बिराएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ !
यस्तै, दुर्घटनामा जीवित रहेका यात्रुहरुको बिवरणले जहाज अवतरण अघि नै कम्पन महसूस भएको देखाएको छ । यसबाट जहाजमा प्राविधिक खराबी थियो कि थिएन भन्ने बारे छुट्टै जांच हुनेछ ।
पाइलट जीवित रहेकाले प्राविधिक पक्षबारे थप प्रकाश पार्न जाँचबुझ समितिलाई सजिलो हुनेछ । क्यानाडाबाट ढाका आएको जहाज नै ढाकाबाट काठमाडौँ उडेको पनि बिमान कम्पनीले जनाएको छ । चक्रपथ डटकम बाट साभार